ဇန်နဝါရီတွင်ယူနိက်တက်ခေါ်ယူမည့်ခံစစ်ကစားသမား(၄)ဦးအားအက်ဝုဒ်ပြောပြီ – FBV SPORT NEWS
ဇန်နဝါရီတွင်ယူနိက်တက်ခေါ်ယူမည့် နောက်တန်း ခံစစ်ကစားသမား(၄)ဦးအား အက်ဝုဒ်ပြောပြီ
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ လက်ရှိ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် (၁၄) အပြီးမှာ ပွဲတိုင်းနီးပါးပေးဂိုးများနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွေ့မှာနောက်တန်းခံစစ်ကစားသမားတွေကို အဓိက ဝယ်ယူမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Coral မှာ အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်..
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ရဲ့ လက်ရှိ ဗဟိုခံစစ်မှူးအတွဲဖြစ်တဲ့ လင်ဒီလော့နဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်မက်ကွိင်းယားတို့ရဲ့ နောက်တန်းဟာ အားနည်းချက်များစွာရှိနေပြီး ပွဲတိုင်းနီးပါ ပရိတ်သတ်တွေကို စိတ်ပျက်စေခဲ့ပါတယ်….
လက်ရှိမှာ မန်ယူအမှုဆောင်ချုပ် အက်ဝုဒ်ဟာ နောက်တန်းကစားသမား(၄) ဦးအား ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွေ့မှာ အရခေါ်ယူသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ထုတ်ပြောခဲ့ပါပြီ ……ဘယ်သူတွေလဲ ?
ရာမို့စ်…..ရီးရဲမက်ဒရစ် အသင်းရဲ့ နောက်တန်းကျောက်ဆောင်ကြီး တဦးဖြစ်သလို အသက်ကြီးပေမဲ့ မပျက်စီးသေးတဲ့ နောက်တန်းခံစစ်မှူးကြီးပါ…သူ့အတွက် မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ ယူရို ၅၅သန်းသုံးရဖို့ရှိနေပါတယ်..
နီကိုလာမီလန်ကိုဗစ် ….ဒီကစားသမားကတော့ မန်ယူနောက်ခံလူဟောင်း ဗီဒစ် လက်သစ်လို့ ပြောနေကြပြီး တကယ်လည်း ပွဲထဲမှာဆို ဂိုးမပေးရဖို့အရေးကို အင်အားကုန်သုံးပြီး ကစားတတ်တဲ့ကစားသမားပါ….သူပြောင်းရွေ့ကြေးကိုတော့ ပေါင် ၂၅သန်းအသုံးပြုရဖွယ်ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်…
အူပါမီကာနို…အူပါမီကာနိုက တော့ နည်းပြဆိုးရှားလ်ကြီးကိုယ်တိုင်က လိုအပ်နေတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ထပ်တလဲလဲပြောနေတဲ့ ဂျာမန် ကျွဲရိုင်းကြီးလို့တင်စားခေါ်ဝေါ်နေတဲ့ ကစားသမားတဦးပါ…သူ့ရဲ့ပြောင်းရွေ့ကြေးကိုတော့ ထုတ်ပြောခြင်းမရှိသေးပါဘူး
အာလာဘာ- ဒီကစားသမားကတော့ အတွေ့အကြုံအရင့်ကစားသမားပါဆိုပြီး ဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ကိုယ်တိုင် ပြောထားလို့ မဖြစ်နေခေါ်ယူရမယ့် ဘိုင်ယန်ကစားသမားပါ….သူ့ကိုတော့ အသင်းကြီးတွေနဲ့ အပြိုင်လုရဖွယ်ရှိတယ်ဆိုပြီး တော့ ဆိုးရှားလ်ကိုယ်တိုင်က ထုတ်ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်..သူရဲ့ပြောင်းရွေ့ကြေးကိုတော့ အတည်ပြုထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး……
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ လာမယ့်ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွေ့မှာ အသင်းရဲ့ ကြွေးမှီအခက်ခဲတွေကြားကနေ နောက်တန်းအတွက် အားဖြည့်သွားမယ်ဆိုတာကို လည်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်…